The man at the hostel | Layma's World
Filed under: Link to the past, Seasonal Post, Tag |
« My words Fearful – Fearless »
စိုးထက် - Soe Htet !, on November 9, 2007 at 7:54 pm said:
ရှိ တတ်တယ်ဗျ … 🙂
မျှားပြာ, on November 9, 2007 at 11:11 pm said:
၀ါး ဟား ဟား ဆိုတာ ရေခဲမုန့်လားဗျ ..
သရဲတော့ ကြောက်ဘူး …
thantzawmin, on November 10, 2007 at 5:16 am said:
အဲ့ဒါမျိုးတွေ ကြားဖူးတယ်၊ တခါမှ မမြင်ဖူးဘူး…
သူပြောတာတွေရော.. မှန်လား ???
chaos, on November 11, 2007 at 2:02 am said:
Thinker, on November 11, 2007 at 10:50 am said:
Type မြန်မာလို ရိုက်ရမှာ ပျင်းလွန်းလို့ မရေးတာ
layma, on November 11, 2007 at 3:44 pm said:
ကိုစိုးထက်… ဆေးကျောင်းမှာဆို အများကြီးပဲနေမှာ…။ ကိုစိုးထက်ရော မေးဖူးလား..။
မျှားပြာ … လူကရေခဲမုန့်ကျွေးပြီးနှင်လို့ရတယ်…။ သရဲက ရဘူး..။
ကိုသန့် … လက်ရှိဖြစ်နေတာတွေတော့မှန်တယ်…။ နောင်ဖြစ်မှာကျတော့မမှန်ဘူး ….။
4. chaos… အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတာညီမလေးရဲ့..။ ကြောက်ကြောက်နဲ့ ပျော်ရတာ…။
winkabar, on November 11, 2007 at 6:21 pm said:
Thura, on November 12, 2007 at 5:39 am said:
Bu Htwar Htwar Tha khwar tha kwar…
ငါ့ဘ၀ သရဲဖြစ်တာတောင် ကောင်းကောင်းမနေရဘူး.. ဟိုခေါ်မေးဒီခေါ်မေးနဲ့….
အခုမှပဲ တရားခံတွေ့တော့တယ်… google earth ရော google search ကနေရော ဘယ်သူလဲလို့လိုက်ရှာနေရတာ.. သစ်ပင်ပေါ်ကနေ သုံးရတဲ့ အင်တာနက်ကလည်းမကောင်း…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ
သရဲ မပျင်းရတော့ဘူးပေါ့…နောက်တစ်ခါ ဆိုလည်း ခေါ်လိုက်နော်..
09507 နောက်ကသုံးလုံးနှိပ်ချင်တာနှိပ် ကိုကြီးဆီကိုရောက်တယ်..
အစ်ကိုကြီး ပျင်းလို့ ကာရာအိုကေ သွားဆိုလိုက်ဦးမယ်….
မိုးချစ်သူ, on November 12, 2007 at 1:41 pm said:
ချစ်မ..ဟုတ်တယ်နော်။ အဲတာတွေ ဆုမွန်လဲ လုပ်ဖူးတယ်။ တခါတလေ မထွက်ဘူး။ သူတို့က ပျော်သွားရော။ သူငယ်ချင်းများကြီးနဲ့ဆို ပျော်စရာကြီး။ ဘလော့ဂ်ဂါ ညီအမ တွေစုံပြီး မေးရင် ပျော်စရာကြီးနေမှာဘဲ။ ယုံတမ်းစကား မဟုတ်ဘူးနော်။ ဂယ် ဂယ်
Chitlaypyay, on November 14, 2007 at 1:00 am said:
ဖျာလိပ်နတ်တော့ မေးဘူးတယ်၊ ဒါတော့ မေးဖူးဘူး၊ အကိုကြီးက ညီမလေးတွေကို ချစ်လို့ မသွားတာနေမှာပေါ့၊ သူရဲကလဲ ကြိုက်နေတဲ့သူ ရှိတယ်လား၊ တော်သေးတာပေါ့ လေးမ မဟုတ်တာ၊ ဟိ
layma, on November 14, 2007 at 1:08 am said:
သရဲကြီးကိုသူရ… မှန်မှာ zawgyi font ကပ်ပြီးမေးရင်ရလား…။ e-mail နဲ့ လှမ်းမေးရင်ရောရလား …။
မိုးချစ်သူ … ဂယ်လား…ဘလော့ဂါ ညီမတွေ အွန်လိုင်းမှာ စုမေးလို့ရအောင် မမ ကိုသူရကို ကမ်းလှမ်းထားတယ်..။
မမလေပြေ … ဟိ…နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေရှိသေးတယ်…အဆောင်က ကောင်မလေးတယောက်ကို သဘောကျသွားလို့ ကျောင်းသွားလဲပါနေတာ…။ လေးမကို သရဲတောင်မကြိုက်ဘူး….။ (လူပဲ…ဟဲ..ဟဲ)
မဟာဆန်, on April 20, 2008 at 5:38 pm said:
လေးမ….archi ကလား။ တို့နဲ့ same batch လို့ထင်တယ်။ ရန်ကုန်မှာ master တူတူတက်ပြီး Ph.D ဆက်မတက်တော့တဲ့ သူငယ်ချင်းလားမသိဘူး။ လေးမ.. သန်လျင် GTC မှာ တာဝန်ကျဖူးလား။ တို့သူငယ်ချင်းမှန်းတော့ သိတယ်။ ဘယ်သူလဲသေချာမသိဘူး။ တို့က IT ကလေ။